Happy itsva gore chido SMS 2018 - Lovesmsbd.com | New Bangla SMS
Home Unlabelled Happy itsva gore chido SMS 2018
Happy itsva gore chido SMS 2018
1.) Kunyange pazvakanga maawa hwako, ndichaita kumira parutivi rwako rwakabata chete kenduru uye Penyesai vose vasiri nokuvhenekerwa nzvimbo. Mwari ngaakurise huchadururira nomwoyo mufaro munyika! Happy New Year 2018!
2.) Tariro iyi zvido akanaka kukubatsira kupemberera inonakidza uye mashiripiti New Year. Achida uri Happy chaizvo New Year.
3.) Mufaro kuna New Year, izvo zvichaita ingabereka azere rombo rakanaka uye mufaro. Goredzva rakanaka!
4.) Distance angave tirambe oga asi mwoyo yedu pamwe chete. Happy New Year mufaro hwangu!
5.) Dai gore idzva zadzwai nekupenya uye tariro kuitira kuti rima uye kusuruvara muvanzvenge iwe. Goredzva rakanaka!
6.) Hope Year New wako uzere kubudirira, utano, kubudirira uye mufaro. Goredzva rakanaka!
7.) Dai uine gore guru izere zvikuru mufaro uye mhanza! Rambira utano hwakanaka uye vabudirire zvikuru dzakakwirira kubudirira. Achida iwe gore chinoshamisa mberi!
8.) Ndicho Year New uye nguva yakanakisisa kuti vavandudze duramazwi hwako noupenyu. Bvisa mashoko akafanana godo, ruvengo, kutsiva, makaro kubva duramazwi wako uye ugoisa mashoko akafanana rudo, hanya, tsitsi, kuvimbika uye kugutsikana panzvimbo yavo. Izvi zvichaita nechokwadi kuti une chikuru uye mhosva isina gore mberi.
9.) Kuva iwe muupenyu hwangu rinotivimbisa ini kuti ndine munhu wekumira uye dzindodana munguva dzokushayiwa. Sezvo gore rino wauya kupera, tinoona mumwe gore vachigara hwedu ichitipa mumwe mukana kuti ikoko mumwe. Goredzva rakanaka!
10.) Pane zvinhu zvakawanda zviri munyika asi kuti kuonekwa uye ruzivo. Rarama upenyu hwako, kuongorora horizons itsva, enda nokuti adventures itsva iyi New Year uye murege kuzvidemba.
11.) Shoko Iri kutaura kwaziso yangu pamwoyo kuti iwe nemhuri yako. Tariro iwe waiva gore guru uye achava kunyange nani imwe nguva ino. Pedzai nguva yako pedyo uye vanodiwa. Nakidzwa!
12.) Imwe zvizivikanwe itsva gore ari pano saka recharge enyu simba uye vawane yakatarwa kunakidzwa. Kusiya pfungwa dzose, kusava nechokwadi uye kutya uye kungotevera mutemo kuseka, rudo, vapenyu.
13.) 2018 rinongova vhuu, chengeta mupfungwa kuti kurarama kamwe chete, upenyu zvikabudura, mitemo tisave kuputsika uye kunakidzwa uye ndinosika nendangariro vose chinokosha.
14.) Izvi New Year chido changu kwamuri nokuda pamazuva dzichikunetsa vakasununguka, pfungwa iri mutoro vakasununguka uye rudo kuti ezvinhu akasununguka.
15.) Ngationei kuti kuita kwedu New Year kupedza kuva ikoko nemumwe uye kubatsira vamwe vanhu vanoshaya kunyange kana tisingazivi pachedu. Saka uyai regai vakapararira vamwe mutsa uye vachikuza!
16.) Dai zuva mutsva New Year achakudzoserai simba uye vibrancy apo kwomwedzi Itsva Year kunounza rugare norunyararo!
17.) Tariro varipo ose akanaka zuva muna New Year anoshumira anokosha pfuma mangwana nani. Nakidzwa New Year.
18.) All kuburikidza Makore yaivapo ini bugged uye akatsamwisa hero kubva kwamuri. Nhasi, pakutanga kwegore idzva Ndinoda kuvimbisa kuti ndinoenda kuramba achizviita gore rino zvakare. Rombo rakanaka kuti!
19.) Kunyange kana ari gore idzva uye zvinhu angachinja ndinovimba kuramba Kudyidzana yedu uye kuramba chisungo ichi zvakanyanya kuti vakawanda kwemakore anouya. Dai mukuru gore idzva!
20.) Makore kuuya uye kuenda, asi gore rino I zvikuru dai iwe kaviri kuti dose utano uye mufaro zvikamu ane wose yakawanda rudo. Goredzva rakanaka!
21.) Knock Knock! Ndini Year New uye ndiri pano ose rudo, mufaro, nezvikomborero uye rombo rakanaka kwamuri. Regai mu nemaoko.
22.) Makore ndiuyewo muende asi ushamwari hwedu kwoupenyu hwose uye isu kuzova vavengi. Saka, asati zuva zvaunoswedera kumisa, ndiri achida iwe kufara uye chinoshamisa New Year.
23.) Sezvatinoita danda kubva rapfuura gore uye kupinda gore rino danda, ndiri kukutumaiwo pamwoyo zvido azere norudo, mhanza, mufaro uye yokufara. Goredzva rakanaka!
24.) Tariro kuti zvose matambudziko ako uye marwadzo kwenguva bedzi wako New Year zvisarudzo. Goredzva rakanaka!
25.) Pane unbolted musuo vakamirira penyu mirwi mikana panorumwe rutivizve. Abate avo ichi New Year uye tibudirire gore mberi.
26.) Mwari Dai huchadururira penyu mwedzi 12 mufaro, vhiki 52 mufaro, mazuva 365 rezvinhu, maawa 8760 weMhanza, maminitsi 52600 noutano hwakanaka uye 31536000 mumasekonzi ose kwazvo uye mufaro! Goredzva rakanaka!
27.) Izvi Year New Ndiri kutsvaka mubhengi kuti kuenda kundipa hombe chikwereti uye ipapo ini kukanganwa zvachose. Musaita kundizivisa kana ukaona mumwe! Happy New Year btw!
28.) Sezvo yose nyika yakatipoteredza anokura nemunhu gore, ndinovimba nemi nhaka mwoyo chinoramba somuduku uye kufara sezvo nguva dzose.
29.) Pamwe ichi Year New ari kuenda munhu kuti anozadzika kurota kwenyu zvose saka kutanga naro nomufaro uye mweya vakagwinya uye! Pano chiri achida iwe yakabudirira gore idzva!
30.) Ndaida kurega zvose zvangu akaipa propensities nokuda uye kuuya gore; Zvisinei ipapo ndakanzwisisa kuti hapana anoitiswa muruzi.
31.) ose masekonzi, maminitsi, maawa, mazuva, mavhiki uye mwedzi uyu New Year Dai achakudzoserai zvikuru mufaro uye mhanza! Goredzva rakanaka!
32.) Tinofanira kuonga Mwari nokuda kuvhura imwezve peji itsva hwedu. Vanotarisira kurarama neimwe nguva wakazara.
33.) Hechinoi chipo rudo, akaputira nokungwarira, akasungwa pamwe nokutenda zvakanaka uye rakanamwa pamwoyo zvido. Goredzva rakanaka!
34.) Dai rimwe zuva kuuya gore kuunza mufaro, mafaro uye inotapira isingatarisirwi hwaswedera! Achida iwe nevose vako vanodiwa munhu nakisisa New Year.
35.) Kanganwa zvose marwadzo, kusuwa uye kukundikana kare gore. Welcome gore rino ine wechokwadi uye kunyemwerera. Goredzva rakanaka!
36.) The New Year ndiyo nguva yakakwana kuitika horizons itsva uye kuziva zviroto zvose. Kuwanazve simba uye ushingi kuti nhema mukati iwe uye achifambirana mberi.
37.) ngaakomborerwe gore rino idzva
norugare rwomumwoyo, rudo rwechokwadi uye unconditional mufaro!
38.) Pane New Year, tinotarisira shure ose inodziya ndangariro, vanodada pamabasa edu uye tora chidzidzo kubva zvatinokanganisa yapfuura. Kunge gore izere zvisingaperi kunonakidza uye laugher.
39.) asati kunobuda zuva kubva zuva 2018 rokutanga, nditendere pendi ose mwaranzi nezvikomborero kubudirira uye mufaro kwamuri. Pano chiri achida iwe hwakazonaka New Year!
40.) Sezvatinoita kupinda ichi Year New pamwe chete, ngatiendei kuvimbisa kuti nguva dzose kuva ikoko nemumwe uye hwokukurira ose kuwa uye ainge. Goredzva rakanaka!
41.) Kana uri mumugwagwa kuti ubudirire, chinonyanya kukosha mutemo kuramba kuenda mberi uye haana kutarira shure. Dai iwe kuzadzisa chinangwa chako uye mune rinokosha rwendo!
42.) Munguva iyi New Year, ngatiite vimbiso kwavanozviita. A chipikirwa kuva nani munhu, munhu nani mhuri munhu uye Chikurukuru nani mugari kuti nyika yedu.
43.) Pausiku vari rima asi mazuva yakajeka, chengeta musoro wako uye mwoyo panzvimbo ndizvozvo. Regai kusuruvara sezvo kwava pedyo. Ehe! Tiri kutaura yaizobudisa New Year.
44.) zvido yangu zvakanaka muri chete haagarimo kuuya gore asi mamwe makore akawanda kuuya. Vane kuzununguka Year New!
45.) 2017 ari kubuda ... New Year 2018 hunouya! Kuita monyorora dzokai, mumwe dzokai uye kutamba usiku hwose. Achida imi mazuva 365 zvachose kunakidza uye mufaro.
46.) Kana uri mufaro, kupemberera ichi Year New achinyemwerera chiso chenyu. Kana usiri kufara, vachiri kudaro kuti wako pedo uye vadiwa kunyemwerera ichi Year New.
47.) Pane zvinhu akasiya vapera kana zvimwe zvinhu vakasiya unsaid asi chii hazvigoni kusiya nekusarega ari achida iwe vanofara New Year.
48.) Iva chaizvo kuti unogona kuona Year New muupenyu hwako zvakare. Dzidza kubva kare zvaunokanganisa uye kutora nyika pamatunhu midzimu!
49.) Achida iwe kufara chaizvo New Year! Vanopemberera zuva nevadikanwi vako uye mhete muna New Year pamwe mijenya nomufaro!
50.) Mwari Dai huchadururira dzenyu vadiwa zvose rudo, mhanza uye mufaro munyika! Nerombo nemwaka kwaziso nokuti New Year kwandiri kwamuri.
51.) Pane izvi pakupemberera chiitiko, tariro une nakisisa January, rugare February, inonakidza March, akanaka April, mupfungwa isina May, unomufaro June, inofara July, akaropafadza August, September anoshamisa, mutambo October, zvakanaka November uye pakupedzisira kupfuura Zvita! Uye vokupedzisira asi kwete zvachose mudukusa, vane kunakidza uye inofadza New Year.
New Year Messages uye SMS
52.) Kunyange kana zuva ose anobvisa zuva kubva hwedu, sunrise ose kunokuvadza zuva idzva akazara tariro uye mikana chete nesu. Kushandisa rimwe zuva kune zvizere mukana.
53.) Hapana anogona kudzokera munguva kuchinja zvikanganiso kana kukanganisa. Saka kurega kufunga kare, kushanda pazuva chipo kuti ramangwana yakajeka.
54) Imi muri mberi nguva nani, tarisa yapfuura zvose demotivating zvinokonzera hwako uye vanovavarira mberi.
55) kusvika mapapiro iwayo uye kubhururuka nokuzvikomo itsva! Tinobereka anotumbuka zvakazara wako uyu New Year.
56.) Ngakuve mufaro mudzimba dzenyu uye ushamwari mumwoyo yenyu. Sezvo New Year pedyo, tariro kunoita pamwe akanaka uye rudo iwe!
57.) Sezvo New Year anowana nzira kwayo kuburikidza chando usiku, pano chiri kukutumai noushamwari mhoro uye zvakasimba kumbundira! Goredzva rakanaka!
58) Uri muroti,
uye iwe uri muiti.
Dai iwe kuita uye kubudirira zvikuru kuita,
pamwe nerimwe gore yakapfuura.
All zvakanaka nokuda New Year.
59.) kunyora mukurusa nyaya zvaunogona woga. Kuzarura idzva bhuku Gore Idzva uye tanga kunyora!
60.) Dai zuva nezuva kuti ukamuka, pamberi mugirazi zvinokufadza uye ivowo munofadza ani wasangana! Kuparadzira mufaro uye ndifare ichi Year New!
61) Sezvo mambakwedza New Year pedyo, rinovimbisa iwe uri nani uye hunogutsa mangwana.
62.) Kanganwa zvose zvinoitika muupenyu rapfuura gore uye kutarisira kufara zvinhu vakaramba zvakachengeterwa iwe.
63) Mufaro kuti Year New kuuya! Ivai inakidzwe mumwe!
64) Year New harisi chete pamusoro kuchinja misi asi yose mirayiridzo. Dai gore zadzwai ngaukufadze uye gaiety.
65) Dai zvakaipa nguva vauye Katariro iyi New Year.
66.) Dai kuuya New Year achitarisira itsva, zvisarudzo vatsva uye mufaro mutsva.
67.) Sezvo gore rapera, dai zvose negativity nematambudziko vanoguma zvakare; dai New Year achaunza chete zvose akanaka.
68.) Dai rimwe zuva New Year achakudzoserai isingatarisirwi inofadza sezvinoita curled petals ane ruva akatambanudza kunhuhwirira zvishoma nezvishoma sezvo zvakunowedzera rukoko kubudikidza rukoko.
69.) Gore Idzva Dai dzenyu nzira plethora mikana inokubvumirai micheka kubudirira nyaya.
70.) Sezvo nyika inokura mumwe gore wechikuru ndinoda kuva mwoyo chinoramba ouduku uye anofara New Year uye nguva dzose. 76.) Izvi Year New usambobvumira kusuwa uye vachivhunduka kudzikatidza wako zvakajeka uye positivity, nokuti ekupedzisira unhu yaizobatsira vauye mushana hwako. New Year Message New Year Message
77.) Yeuka kuti hapana Year New anogona kuva vakakwana. Asi unofanira kufuratira akaipa Vanombundikira zvakanaka.
78.) Izvi Year New anogona iwe svetuka kupinda mweya wako uye iumbe ushamwari husingaperi pachako.
79.) Dai rimwe zuva New Year ave pakupemberera nemi wakapoteredzwa nevaya hanya.
80.) Izvi Year New ndinoda kuti kuva nepfungwa dzakazaruka nokuti hauzivi kuti zvishoma isingatarisirwi upenyu anogona kukanda nzira yako.
81.) Izvi Year New Ndinovimba kuti danho rimwe nerimwe iwe tora anotungamirirwa nemaropafadzo aMwari.
82.) Hapana Year kungava pamubhedha Roses. Asi ndinoda iwe ushingi uye chivimbo kutsausa chipingamupinyi chimwe nechimwe kupinda mukana munguva kuuya New Year.
83) Year New wenyu ngaave senyanga sezvo pamushana uye sezvo kunhuhwirira sezvo maruva.
84.) May kurota kwenyu zvose kubva wokupedzisira gore yakava kuita panguva iyi New Year.
85.) Izvi Year New sezvo imi kufora vakananga mukuzadzikisa hope dzako zvose ngaparege kutya kupinda nenzira yako kuvhara nzira yako.
86.) Dai egore kubvisa zvose kusuwa uye kwenjodzi sezvakanga sezvainofamba uye vazadze mazuva ako kuuya pamwe mushana uye mufaro zvino uye nguva dzose.
87.) Izvi Year New anogona here kuwana ruoko asi yakasimba rudo ushamwari uye ushamwari nguva mumwe iwe ruoko zvako.
88.) kubudirira kwechokwadi kunouya kune vaya vakagadzirira nokuda chete. Saka haana kubuda shure uye nguva dzose ave noushingi kugamuchira matambudziko matsva. Achida uri kufara chaizvo gore idzva 2018.
89.) Regai dai uri Happy chaizvo New Year pamberi dzenhare mitsetse kuti wavharwa uye Indaneti akasungirirwa. Happy New Year 2018!
90.) Ngatiitei bato Hakozi nguva New Year. Kupemberera Happy New Year 2018 neni usiku hwose, kuitira kuti tinogona kugumisa gore pamwe chete uye kutanga gore idzva pamwe chete.
Dai mwenje mufaro, jekesa hwako upenyu muzadze mazuva ako
yakajeka ichivaima norugare, mufaro uye vaanotendera. Happy New Year ..................... kufara itsva gore tutsamba shamwari
ndakasangana rudo, utano, rugare uye mufaro,
Vaida nzvimbo yechigarire kugara.
Ndakavapa kero tariro muUri vakasvika zvakanaka.
Zvose izvo anofuridzira nepfambi,
zvose izvo zvinoreva kwazvo 2 nepfambi,
zvose zvinoita nepfambi kunyemwerera & kunounza nepfambi mufaro ........................... ..best kufara itsva gore kushuvira shamwari
ndinoshuva 4 nepfambi mugore idzva.
Sezvo 2017 mashizha, dai abvise naro kusuwa kwenyu kwose uye kunetseka.
Sezvo 2018 wasvika, dai kuuya newe chisina kusvibiswa mufaro uye kubudirira.
Dai gore rino idzva kunoita chete mufaro kubvarura,
Munhu wose anoda chete iwe anodiwa,
matambudziko ako ose achava kupedzisa
Zviri iwe wangu mutsva regore rinokosha chishuvo .................... ........ kufara itsva gore mashoko
mugore idzva ichi Happy.
Ngatitaurei nani munhu,
nani mhuri murume,
uye muduku mumwe mugari muna 2018 nani ..
Mwari chisarai 2017!
Dil bhairav gehrai Se
Pholon K kaghaz paminiti
Aap chaithanya liye sirf 3 lafz
KUFARA NEW GORE || itsva gore msgs mu Hindi ||
Usiku vari Dark asi Days vari Light,
nousiku vari Dark asi Days vari Light,
Wish kwenyu Upenyu kucharamba Bright.
Saka Dear yangu usaswedera Kutya
Hakozi, Mwari Gift takazvikumbirira "BRAND NEW GORE".
KUFARA NEW GORE
Chimwe chinogona kusiyiwa ndoparara
Vamwe Mashoko anogona kusiya unsaid
Vamwe manzwiro anogona kusiya unexpressed
Asi mumwe akafanana hamungaiti achasiiwa.
Ndinoshuva uh Happy New Year 2018 ................. kufara itsva gore tutsamba musikana
Sada barte rahe aap bhairav mukurumbira,
aur maira yakawanda kunonakidza & masti.
Dai a..Happy gore idzva rine
zvakawanda norugare & kubudirira .......................... kufara itsva gore msgs mu Hindi
Aanewala Ha ruzha laye Khusiyo Ka Tyohar,
Ko ummid Ka sath aao bhulke sare Gum
gore idzva 2018 Ko Hum Sab Kare WEL-Vuya!
Jo kuti chahe nhamo Tera Ho,
Har ruzha khubsoorat aur ratain roshan Nhai,
Kamiyabi chumte rahe tere kadam humesha Vijay,
naya Saal Mubarok Ho tuje zvawo Vijay.
Chimwe chinhu kunyemwerera venyu unotaura kwandiri,
chimwe chinhu inzwi rako iro anoimbira kwandiri,
Chinhu pamberi penyu anoti kwandiri,
kuti muri Mudikanwi kwandiri.
Goredzva rakanaka !!
Kufanana Chocolate Cake Anoenda Perfect With Wine
My New Year Uchange vasina kukwana Vasina iwe.
Plz neni On ichi New Year nokusingaperi.
Goredzva rakanaka !! ........................ söpö itsva gore SMS kuti musikana
Young mwoyo kuti R uzere inofadza, With haana pfungwa kwekurwadziwa.
The Old unodzima, asi vakafara Young Year 2018 Anouya merrily mu mangwana.
Naizvozvo Wish UA Happy Very Evening.
Also Wish U Great Days Muna 2018
Upcoming Makore All In Ur Life, Vakazadzwa nomufaro.
Dai gore idzva
Uya zvido izvi mose
Ushamwari rudo, kunyaradza pamba
Mufaro vana venyu,
Company uye kutsigira mhuri N shamwari
A mwoyo hanya kuti anogamuchira
N anobata vanhu vose zvakafanana
vapfume zivo N
Courage kutsvaka N kutaura chokwadi
Kunyange kana zvinoreva akamira oga
tariro n vanorota chete nyika n munhu
The chido kuti zviitike
A chiedza kutungamirira nzira dzako
Kubatsira maoko kusimbisa kubatana
rwune n runyararo mukati mupfungwa dzako,
Dai mweya uyu yezororo
mwaka zadza mwoyo wako norudo
rugare uye runyararo zvina
achida iwe zvido akawanda
Idzva Year Advance!
regai gore rinouya kuva anokudzwa mubayiro zvose kuedza kwako yemberi kubudirira
Dai vanofara nguva uye ushamwari ndangariro yakajeka gore renyu idzva. Itai gore guru. Goredzva rakanaka.
Happy gore idzva pachine kuti nepfambi & Ur mhuri.
Gore rino wll kuuya nepfambi kubudirira,
Nakidzwa evry ikakuruma upenyu
Sath maira apno se,
Rahmat maira omukuru se,
Pyar maira sab se,
mukuru Se ke aap khus rahe sabse ..
Happy New Year !! .. ....................... yakanakisisa gore idzva kufara akashuva shamwari
Dunya NE Kiye Bohat Zulm-iwe-Sitam.
Dunya NE kiye Boht Zulm-iwe-Sitam.
Ita New Year wako Nokufema mafaro! Vanopemberera mavambo matsva pamwe
mafayawekisi uye kuvakwazisa shamwari dzako uye mhuri pamusoro avaida gore idzva 2018
Ndinoshuva kuti hapana chimwe misodzi nepadama wako uyu New Year.
Ngaakuropafadze nomufaro uye mufaro ose gore kumativi.
Kunyangarika zvose thats zvakaipa, kugamuchira zvose Ndiko chido chakanaka iwe kufara chaizvo itsva gore.
Regai muchiso Year New anowana iwe itsva, kufara, hutano, zvikuru nomufaro, zvikuru vachifara uye kugutsikana.
Pano ari achida iwe munhu Happy New Year ............................ yakanakisisa kufara itsva gore SMS
Huchabvisa Ruvengo, Nezvoruchiva, Godo, Grudge, Ruvengo, Makaro kubva duramazwi wako Evha gore idzva rino
uye todzitsiva Love, Kuzvipira, Support, Tsitsi, Kutendeseka uye Kugutsikana,
Pano achida iwe kufara chaizvo itsva gore ...... ................. yakanakisisa gore idzva anofara anoda SMS
Dai mweya nguva New gore kuzadza mwoyo wako kudzikama uye rugare. Dai kufara itsva gore!
Dai gore rino idzva kuva danho mberi,
In vanokutungamirirai kuti adventures itsva,
migwagwa New kuongorora uye kubudirira itsva kusvika!
Happy New Year 2018 ................................ yakanakisisa kufara itsva gore SMS
anobvumira mhete gore rino idzva nezvinhu zvakanaka chete dai iwe vanofara itsva gore.
PaLaxmi Ka haath Ho
aur paLaxmi ke ashirwad Se ...
Apake jivan chikuru Prakash
mhoro Prakash Ho
"Happy itsva gore" ...................... yakanakisisa anofara itsva gore SMS mu Hindi
heartiest My akashuva mukuru gore idzva.
Mwari akukomborere. Dai kufara chaizvo itsva gore .................................... yakanakisisa kufara itsva gore SMS shamwari
nomwoyo anobaya mwoyo, ndinoda uve inofadza yakanaka uye anoshamisa Year New.
May chipo iwe mwari manyorero kutendeutsa hope wako chokwadi mugore rino idzva. Dai Happy gore idzva.
Ndinoshuva muchinge kwawakabva zhinji uye nokwawaienda gore rino. I dai vanofara chaizvo itsva gore.
Joy, mufaro, rudo uye utano hwakanaka izvi zvose Ndinoshuva kuti iwe gore rino idzva. Dai Happy gore idzva.
Tariro The New Year rinounza mitoro mutsunge moyo, nokuti iwe, Wish iwe Happy New Near uye rombo rakanaka.
Dai Dreams Your zvose Chokwadi, gore rino idzva. Dai vanofara itsva gore.
Mumazana Kuuya Year anogona hwako upenyu muzadzwe shoma kupemberera Happiness ...
anoda iwe uri Chiedza, Happy uye yakabudirira New Year 2018 naMwari ropafadzai ..
Zadzai muUri upenyu pamwe Mufaro & Rakajeka Cheer,
Uyai kuna nepfambi Mufaro uye Kubudirira nokuda Year wose,
Uye Year New wangu dai 4u Dear ...
Wish ua, CHAIZVO VANOFARA NEW GORE.
Iva raifara, Hakozi
Zviri gore idzva! Happy gore idzva 2018
itsva gore SMS mu, itsva gore SMS kuti musikana, mufaro itsva gore mharidzo yokuenzanisira, itsva gore SMS 2018, gore idzva akashuva shamwari, mufaro itsva gore shoko Gujarati, itsva gore mashoko 2017, kusetsa vanofara itsva gore shoko